DHACDOOYIN XIISO BADAN
Loading...	Home Maqaallo DHACDOOYIN XIISO BADAN
DHACDOOYIN XIISO BADAN	Tuesday, 05 January 2010 06:05	administrator	SAAXIIBO SHAQO LAYAAB DARTEED ISKU SEEGAY
Geesguud:Gabar lagu magacaabo Yaasmiin Cabdi & wiil la yiraahdo Maxamed Nuur oo ku dhawaad 4-sano xiriir jacayl uu ka dhexeeyay ayaa isku qabsaday arrin mucjiso leh.
Sida uu wariyaheena Yuusuf Maxamuud Warsame (Bidaaye) u sheegay Oday garta labadaas ruux qaaday ayaa warku sheegayaa in Maxamed Nuur oo darawal Basaska BL-ka ee Kaaraan ka shaqeeya ah uu Suuqa dawada ee Bakaaraha uu ku arkay gabadhiyoo ku jirta shaqada gacan hoorsiga ee Tuugsiga, arrintaasoo filanwaa ku noqotay.
Buuq ka dhashay arrintaas ayaa waxaa soo dhex galay Odayaasha degaanka Xamar Jajab oo ay labadoodu wada deganaayeen, balse wuxuu wariyaheenu soo sheegay in lagu guuldareystay oo sababtaas darteed ay ku kala tageen.
CUDURKA DAAFKA OO BAAJIYEY AROOS QARASH FARA BADAN UU KU BAXAY
Geesguud:Wiil la yiraahdo Maxamuud Cali oo degan xaafadda Cali-kamiin ee Magaalada Muqdisho ayaa aroos uu geli lahaa habeenkii Jimcaha ee la soo dhaafay iyadoo qabqaabada arooskaa lagu guda jiro gabadhii loo aroosin lahaa ay diiday.
Sida uu inoo sheegay Joornaaliiste Cali Midnimo oo degaankaas degan wiilka oo habeenkii uu aqal geli lahaa galabteedii cudurka daafka uu ku soo booday ayaa gabadhii uu la aqal geli lahaa diiday inay la aqal gasho Nin qaba daaf iyadoo ka baqeysa in uu qaadsiiyo cudurkaasi daafka.
Sida warku naguu soo gaaray aqal geynta arooskaa ayaa dib u dhacay kadib markii gabadhu codsatay in marka uu daafka ka soo bogsado ay aqal galayaan inta ka horreysana ay sii suganayso, taasoo labada dhinac ay isku raaceen maadaama gabadhu xujo adag la timid.
NIN GURI UU IJAAR UGU JIRAY GUUR BADNI DARTII LOOGA SAARAY
Geesguud:Nin aanan magaciisa helin oo deganaa agagaarka Warshaddii hore ee Caanaha ee magaalada Muqdisho ayaa guri uu ijaar ugu deganaa si qasab ah looga saaray.
Sida aan ka soo xiganay Milkiilihii gurigaas Maxamuud Abtidoon Ninka guriga laga saaray oo ahaa Waddaad dhalinyaro ah oo gurigaasi deganaa muddo saddex sano ah sababta looga saaray ay tahay muddadaas oo 11-naagood oo uu gurigaas ku soo guursaday uu saddexdaas sano gudahood furay, furiinkiisaa badan darteedna looga saaray guriga.
ISBAARO CAJIIB AH OO KA DHACDAY MUQDISHO
Geesguud:Nin ka gaabsaday inaan magaciisa la soo qorin oo degan degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho ayaa Jaad uu ka soo iibsaday xaafadda Via Laybeeriya ee isla degmada Waaberi ayaa waxaa soo daba wiideystay (daba kacay) rag mooryaan ahaa oo goobta uu Jaadka ka gadanayay ka soo raacay.
Wariyaheena Yuusuf Bidaaye oo warkan ina soo gaarsiiyey ayaa inoo sheegay in Ninkaas diiday magaciisa uu bar garanayo ragga Mooryaanta ah kuwaasoo ku qabtay qori markii uu xaafadda horey u soo galay, waxayna ku yiraahdeen “Saaxiibow waan ku naqaanaa kuma xumeynayo ee adiga ha ina xumeynin, waxaadna nagu soo wareejisaa Jaadka subarka ah ee aad wadato, Rubacan oo nagu maraxoobay qaado, haddii aad isku daydo inaad diido ogow Afar Tiir Xarar ah iyo Fuusto ayaad kor u eegeysaa oo la macno ah waan ku dileynaa oo Fuusto & Tiirarka qabriga lagu daboolo ayaad kor u eegeysaa”.
Arrintaas oo sida uu ninku sheegay mucjiso lama gudbaan ku noqotay ayuu u hoggaansamay kadibna iska qaatay Rubicii jaadka ee ay siiyeen dablaydu